Somalia oo loogu deeqay $143 milyan oo dollar iyo DF oo War ka soo saartay | Allbanaadir.com
Home MUQDISHO Somalia oo loogu deeqay $143 milyan oo dollar iyo DF oo War...
Somalia oo loogu deeqay $143 milyan oo dollar iyo DF oo War ka soo saartay
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif ayaa ku tilmaamay waxa u wanaagsan ee uu maqli lahaa go’aanka uu Bangiga Adduunka ku ansixiyay 143 milyan oo dollar, lacagtaa oo lagu taageerray barnaamijka qaran ee taageerrada Dadka nugul ee Baxnaano.
Bangiga Adduunka ayaa taageero dheeraad ah siinaya hindisahan ay dowladdu hormuudka ka tahay. Maalgelinta dheeriga ah waxay ballaarin doontaa daboolida mashruuca horay u jiray ee 20,000 qoys. Waxay sidoo kale siin doonaa lacag caddaan ah oo degdeg ah 338,000 qoys, iyada oo ku dari doonta 160,000 qoys kuwaas oo horay uga heli jiray qaadashada lacagta caddaanka ah degdegga ah ee mashruuca qeybta ka ah barnaamijka Baxnaano ee taageerrada qoysaska uu saameeyay Ayaxa.
“Taageerrada dhaqaale ee bangiga Adduunka waxay wax ka tari doonta ka jawaabida xaaladaha deg degga ah ee ka dhashay abaarta.” ayuu yiri Wasiir Cabdiwahaab oo inta ku daray “ Waan uga mahadcelinaya tallaabadan Bangiga Adduunka , waxaana xaqiijinaya Dawladda inay sameynayso wax walba si loo taageerro qoysaska.”
Bangiga Adduunka ayaa sidoo kale ka faa’iideysanaya dhowr mashruuc oo horay u jiray si loo xoojiyo wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya. Iyadoo loo marayo Baxnaano, Bankiga Adduunka wuxuu taageeri doonaa ku dhawaad ​​500,000 qoys si ay uga hortagaan abaaraha socda.
“Waan ku faraxsanahay helitaanka warka, ogolaanshaha $143 milyan si wax looga qabto abaaraha, anagoo adeegsanayna barnaamijka qaran ee taageerrada qoysaska nugul ee Baxnaano, waxaan sii wadnaa inaan u adeegno kuwa ugu nugul.” Madaxa barnaamijka Baxnaano, Fardosa Axmed Cabdullaahi ayaa hadalkay sheegtay, markii uu soo baxay go’aanka uu bangiga ku ansixiyay lacagtan.
“Xaaladdu waa murugo, Bankiga Adduunkana waxa uu sameynayaa wax walba oo uu ku badbaadin karo kuwa ugu nugul xilligan,” ayay tiri Kristina Svensson, Wakiilka Bangiga Adduunka ee Soomaaliya. “Waxaan ka faa’ideysaneynaa iskaashiga aan la leenahay hay’adaha bani’aadamnimada si loo yareeyo xaaladdaha abaaraha,” ayay raacisay.
Previous articleShirkadaha Leyrka Somaliland oo dhimay saacadihii joogtada ahaa ee korontada (Sababta)
Next articleMadaxda Midowga Yurub oo ansixiyey dalab culus oo ka yimid dowlada Ukraine